Madaxweynihii hore ee Suudaan oo xukun lagu riday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxkamad ku taalla Magaalada Khartuum ee Caasimadda Suudaan ayaa maanta xukun ku riday Madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Albashiir.
Xarunta maxkamadda waxaa markii hore harreeyay dibadbaxayaal taageersan Cumar Xasan Al-Bashiir kuwaas oo qeylo billaabay markii uu Garsooraha ku dhawaaqi lahaa xukunka.
Waxay ku qeylinayeen in dacwadda ay tahay mid siyaasadeed, ka dibna garsooraha ayaa amray in ay ka baxaan maxkamadda gudaheeda.
Gudoomiyaha Maxkamadda ayaa ku dhawaaqay in Cumar Xasan Al-Bashiir lagu xukumay laba sano oo xabsi ah, mana la geyn doono xabsi caadi ah, balse waxaa lagu hayn doonaa xarun dhaqan-celin.
“Maxkamadda waxay dembi ku heshay Cumar Xasan Axmed Al-Bashiir, Maxkamadda waxay go’aansatay in ay u dirto xarun bulsho oo loogu talagalay daryeelka iyo dhaqancelinta oo laba sano lagu hayn doono.” ayuu yiri garsooraha go’aanka gaaray Al-Sadiq Cabdiraxmaan.
Waxaa lagu helay in uu galay dembi musuqmaasuq. Kiiskan waxaa xudun u ahaa $25 milyan oo dollar oo laga helay gurigiisa muddo yar ka dib markii xilka laga qaaday, horraantii sannadkan.